Ngu kude endaweni kunazo owaziwa futhi idume ngokudla ezihlukahlukene imibukiso kuyinto "Expocenter". Moscow unikeza le best, indawo abaningi banamuhla futhi ukhululekile kwemicimbi. Namuhla sifuna ukwethula kafushane ukuthi izinkonzo ezenziwa isikhungo embukisweni, kanye schedule for esikhathini esizayo esiseduze.
Ngesikhathi "Expocentre" icala (eMoscow) - lokhu akukona endaweni entsha. Esikhathini esingeside esidlule, isikhungo yayigubha iminyaka engu yesihlanu. Lena inkathi eside, phakathi kwesikhathi lapho khona owawuse isibalo esikhulu sezithunjwa nemibukiso bonke osayizi. Naphezu nezindikimba nokubaluleka yokuxhumana nabantu, bayakwethemba zonke ukwabelana into eyodwa: bavalelwa ezingeni professional kanye lobuchwepheshe eliphakeme. Le nhloso sokuqala ngezizathu embukisweni, elisebenza emihle "Expocenter". Moscow ngonyaka izivakashi eziningi, eziningi zazo ezingase zibe osomabhizinisi. Zonke kodwa nesikhathi esihle, anomgomo - ukuvakashela nemibukiso ezinkulu, ukuthola umphakeli omusha noma amakhasimende wholesale, ukukhangisa imikhiqizo noma amasevisi abo. Sicabanga ngale migomo kahle ilawula semibukiso.
Ngisho ngaphandle nibonakala kubantu nilungile isakhiwo edonsela izivakashi ibhizinisi emfushane yalo, kodwa ngesikhathi esifanayo uhlobo lemukelekako. Lokhu Ensemble kwezakhiwo yezakhiwo kanye zobunjiniyela ezihlangabezana nezidingo yakamuva. Ukuthuthukiswa kwalesi sikhungo iphutha ehlelekile zonke engu-50 edlule. Kuze kube manje, izimo best for yiluphi uhlobo izinkundla ezinkulu ukunikeza eMoscow. "Expocentre" has emadokodweni ayisishiyagalolunye nge imishini yesimanje kakhulu izingqungquthela kanye nezingxoxo. Kukhona kungenziwa kanyekanye labetibambile eziningi emihlanganweni bemvelo ezahlukene. Yingakho lapha sifuna zonke elite ibhizinisi, imihlangano enjalo ukunikeza ithuba wenza izinkulumo ezintsha.
Uphi "Expocentre" (eMoscow)
Futhi lokhu futhi esibalulekile. Ungakhathazeki ngalokho uzothola izivakashi zakho futhi uhlala, kungaba eyodwa bani akunandaba impumelelo umcimbi. Ikakhulukazi, uma indawo womhlangano inhlokodolobha eMoscow. "Expocentre" Itholakala enkabeni yedolobha, eduze yamabhizinisi. Lokho ngaphakathi ukuhamba ibanga uma usuka emigwaqweni emikhulu yedolobha, amahhotela kanye kamasipala. Amakhasimende nesibambisene nabo ebhizinisini kalula futhi okubaluleke - masinyane ukuya endaweni bese sihlele usuku lonke.
Lokhu enakekela ingqalasizinda inhlokodolobha sika. Ikakhulukazi uyajabula Eqinisweni eduze ngokushesha lenqwaba amahhotela kanye emahostela lapho ungahlala ihora, thatha ikhefu kusuka endleleni futhi yokuzibeka ukuze. Sizokwenza yishoni kuphela ezinye zazo, okuyinto ikakhulukazi idume eMoscow. "Expocentre" itholakala cishe kwaze kwaba ehhotela "Crowne Plaza", "Novotel" ehhotela "ku Krasnaya Presnya", "eMoscow efulethini ITC", "Empire City" efulethini "MosApart" nabanye. Njengoba ubona, kukhona lokuzikhethela, futhi kokubili ukubaluleka amasevisi anikezwa lapha ukubiyela ebanzi ngokwanele kanye nobungako, ungakhetha ukuze ivumelane zonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Isikhungo semibukiso has zokungena ezintathu. Lona North, South neNtshonalanga. Banikezwe yemakhono isakhiwo kubaluleke kakhulu. Ngakho-ke, engafinyelelwa kusuka cishe kunoma ingxenye, ngakho ukuthatha ipiki. Kubalulekile kakhulu ukuthi leli hhotela elula ukuza esitimeleni. Ukuhamba ibanga ukuya esiteshini "Exhibition" futhi "Indawo yebhizinisi".
Imibukiso: Spring 2016
Empeleni umcimbi lapha akagcini unyaka wonke. Kodwa entwasahlobo avame nemibukiso kakhulu elindelwe, okuyinto uzilungiselele nokunakekelwa okukhethekile. Ngakho-ke othandwa kakhulu phakathi 'Expocentre "izivakashi ngalesi sikhathi. Sikhungo (eMoscow), "Isikhumba Umhlaba" izobanjelwa lezi zindonga ngokushesha ngangokunokwenzeka, kusuka 22 kuya 25 Mashi. Lona 45th International Festival of izicathulo kanye nemikhiqizo lesikhumba. Izifundo - imikhiqizo siphelile: nezicathulo, isikhumba izimpahla nezinsiza, kanye noboya ngomumo eyenziwe kanye nokuqoqa izimali zesikhwama ukunakekelwa nezicathulo.
Ngosuku olufanayo izobanjelwa le-12 nele-International Forum for Health Information Technology. Isihloko embukisweni kuyoba kokwenza tangcondvomshini ucwaningo nokuhlola, kanye software ahlukahlukene: Amarekhodi ngogesi ezempilo amarekhodi esibhedlela , nokuningi.
Ngakusasa, 23 Mashi, ukumema amabili nantathu embukisweni international kwezokuvakasha umkhakha. Kuyinto isihloko National ukuvakasha Administration, isikhungo ulwazi ezokuvakasha kanye embonini yezokuvakasha inhlangano. Okungukuthi, ungathola lonke ulwazi mayelana kuphi futhi kanjani ungaba ukuphumula. Futhi isinqumo omkhulu, kungcono lolwandle iholide, ulwandle kanye emfuleni Cruises, iholide kahle, ukuyothenga izinkambo zemfundo, kanye nokunye okuningi.
Ngosuku olufanayo, uzothola fair "abaculi emgwaqweni". embukisweni Bright okungavamile ngempela ukunambitheka yakho. Lapha ungathola eziyisikhumbuzo ezithakazelisayo kanye jewelry ngezandla, amathoyizi sokhuni, amaswidi Russian izimonyo ngezandla.
Kakade Mashi 24 izivakashi ihlangabezana embukisweni international enikelwe angaphandle ingcebo. It is ohanjelwa ejensi kanye nomthengisi izinkampani, abasebenza emazweni ahlukahlukene e Western naseMpumalanga Yurophu, futhi Central kanye eMpumalanga Asia. Ungathola ulwazi olugcwele mayelana ukuthenga noma ukuthengisa, kwamanye amazwe nokuqasha noma Leasing izindlu emafulethini, amafulethi.
Nalapha futhi, siyakwamukela kulo "Expocentre" (eMoscow)! Bonisa ISimiso Apreli ejabulisa a kokuhlukana ezinkulu. Lapha wonke umuntu uzothola okuthile ukuze ukunambitheka kwakhe. Kusukela ngo-Ephreli yeshumi nambili iqala nomqondo imoto wabenza Russian. Ngakho, abagqugquzeli uzibekele imigomo yabo ukuhlinzeka bonke abahlanganyeli ebhizinisini yezimoto isiteji olubumbene ingxoxo lwezindaba nezokusigcoba kanye exchange of ulwazi amasu ukuhlola imikhiqizo kanye namasevisi of abanikezeli wabenza imoto.
Kusukela ngo-Ephreli 13 siqala Russian Lika Electronics kanye Automation, 2016. Kuhlale embukisweni ethandwa kakhulu, njengoba inikeza izivakashi ezihlukahlukene ze-elekthroniki kanye amamojuli, okuyizinto ezibalulekile for nenqwaba amagatsha. Izifundo - kumadivayisi ahlukahlukene Semiconductor, izingxenye electromechanical futhi uxhumano ubuchwepheshe, software kanye hardware design lezifunda ihlanganiswe, amamojuli electronic nokuningi.
Ngalezo zinsuku ezindongeni isikhungo embukisweni labetibambile Umbukiso ezikhethekile amadivayisi namathuluzi wokulinganisa testing Isilawuli lapho omningi imishini ezahlukene, okungaba wusizo kuwe kohlaka izokwethulwa ukukhiqizwa yethu siqu futhi ibhizinisi.
Ngo-April 16 iqala Festival zokuphila suburban. Lapha sibaningi izokwethulwa imishini ehlukahlukene engadini ngoba namaholidi asehlobo. Lokhu ukosa inyama kanye grills, ukosa inyama kanye gazebos, amathuluzi nemishini wokulungiselela ukudla ongaphandle. Kulesi mbukiso, futhi ungathola okukhethwa kukho supply gazebos egoqekayo futhi ifenisha engadini ukuze ehlobo oluzayo kwakujabulisa. Njengoba ubona, eziningi ngamathuba ebhizinisi kukunika eMoscow. "Expocentre", isithombe ungabona - iphedi ukuqaliswa for ekuqaleni abantu abadala kanye namathuba sangempela ekhona.
Czech Republic, ePrague: izinto isithombe
U-Angelina Jolie kabili: phezulu 15
Kudoti ukugunda izinwele - ibanga elisha intsha!